Iindaba - Imiboniso yeSano Laser
Inkampani ye-Sano Laser iyaya eDubai, eSpain, e-Itali, eTurkey, ePoland, naseRomania kwimiboniso minyaka le.
Lo ngumfanekiso xa sisiya e-India Exhibition. I-India yeyona ntengiso iphambili kwinkampani yethu. Sinosasazi oluninzi eIndiya. Kwaye siza eIndiya 3-4 amaxesha kanye ngonyaka.
E-Turkey umboniso, i-diode laser, ulusu olupholileyo kunye ne-picosecond Nd yag umatshini we-laser ngowona mshini uthengisa kakhulu. Kwaye siye umhambisi diode laser kunye picosecond ND yag umatshini laser eTurkey ngoku.
Sineqela lokuthengisa ulwimi lwaseRussia kwinkampani yam. Zijolise kwiUkraine, iRussia kunye neRussia kwintengiso yamazwe. Kwaye beza ukuya kumboniso waseRussia nowaseUkraine minyaka le.
Umboniso waseHong Kong ngumboniso wamazwe aphesheya, siya kulo mboniso minyaka le, kwaye sinendawo enkulu yomboniso eHong Kong.
EPoland, i-IPL, umatshini weMicroneedle RF kunye nomatshini we-diode laser bayathengisa.
Beijing Sano lasers S & T Co., Ltd. Ngaba umenzi ngobuchule aesthetics & Medical laser koomatshini e China. I-Sano lasers ineziko lophando kunye nophuhliso, iklinikhi, ukuthengisa kunye namasebe emva kokuthengisa; Unokunikezela ngenkxaso yobuchwephesha bobuchwephesha kunye nedatha yekliniki okokuqala. Sinokukugcina uhlala uphambili kwicandelo lobuhle, ngenxa yeqela lethu lobuchwephesha elidibanisa ngokukhanya, oomatshini, umbane kunye neyeza.
Ukusukela ngo-2005, uSano usebenze ngokuzimisela kwaye ngoku unamalungelo epropathi azimeleyo epaki yemizi-mveliso, engaphezulu kwe-100,000.00m2, nangaphezulu kwabasebenzi abali-100. Kwakhona simisela inkampani yesebe eHong Kong. Sithathe inxaxheba kwimiboniso yezizwe ngezizwe minyaka le. Ngeenzame, i-Sano lasers Inkampani ifumene inani lezatifikethi zonyango zasekhaya nakwamanye amazwe ngezixhobo zakhe ezahlukeneyo, ezinje nge (TUV) CE, (TUV) ISO 13485, FDA, iSatifikethi; Kunye nelungelo lokungenisa kunye nokuthumela kumazwe angaphandle isatifikethi, iiMvume zoShishino lweeMveliso zeSixhobo soNyango kunye neSatifikethi seShishini esiPhakamileyo.
Ngefilosofi ejolise kumashishini ejolise kubathengi kunye nenjongo yesayensi kunye netekhnoloji kuqala, qinisekisa umgangatho ophezulu kunye neemveliso ezingabizi kakhulu kubathengi; Oko kusenza sizuze abathengi abaninzi kwihlabathi liphela. I-Sano lasers Inkampani isebenza nzima ngamaxesha onke, kukuba ngumkhokeli ophambili we-OEM / ODM wamanye amazwe kuzo zonke izixhobo zobuhle kunye nezonyango kwihlabathi.
Itekhnoloji yobuchwephesha ixhasa:
Sineziko le-R & D labantu abangama-20, emva kweqela lokuthengisa labantu abangama-20 kunye neqela leklinikhi labantu abali-15. Sinokukunceda kuyilo olutsha kwaye uphuhlise, isicelo sesatifikethi, kunye nokusombulula iingxaki zakho zeklinikhi. Ungasifumana ngokulula ngomnxeba, ikhamera yewebhu kunye nengxoxo ekwi-intanethi ngoncedo lwevidiyo kunye nomzekeliso. Ewe sinako ukubonelela ngeenkonzo zesiza.
Wamkelekile kwi-Sano lasers!
Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Umatshini weLaser we-Co2, Shr IPL Khetha, Ukususwa kwamabala amabala, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Ubuhle be-CO2 Laser,